Imibuzo evame ukubuzwa - Jiangxi Kaishun Garments IMP & Exp Co., Ltd.
Ijakhethi yoboya obumhlophe
I-hoody yesigqoko esiyindilinga esiyindilinga
intamo eyindilinga Amahembe
Ingabe uyimboni noma inkampani yokuhweba?
Siyinkampani eyinhlanganisela yokukhiqiza nezohwebo, ifaka imboni kanye nebhizinisi lokuhlanganisa ibhizinisi.
INGABE uyakwamukela ukwakhiwa kwamakhasimende nendwangu?
Yebo, bobabili usayizi nombala bangenza njengokucela kwamakhasimende, ama-logo wangokwezifiso namagama ngamanye, izinombolo zingangezwa njengoba zidinga, Vele udinga ukusithumela i-Logo yakho noma i-Design ku-PDF noma ku-AI Ifomethi, noma usitshele izicelo zakho eziningiliziwe. Abaqambi bethu abangochwepheshe bazohlinzeka ngesixazululo esihle kakhulu kuwe.
Ungayilawula kanjani ikhwalithi?
Ikhwalithi ibaluleke kakhulu Imfashini ngaso sonke isikhathi inamathisela ukubaluleka okukhulu ekulawuleni ikhwalithi kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Ifektri yethu isethe umthengisi we-QC ukuhlola ikhwalithi ngamunye ngamunye esinyathelweni ngasinye.
Ngingawathola kanjani amasampula?
Siyahlonishwa ukukunikeza amasampula.
1), Uma sinesampula esitokweni, sizokunikeza, umane usinikeze i-Express A / C No.
2), uma singenayo esitokweni, sizokwenzela yona, khona-ke kufanele ukhokhe imali yesampula nemithwalo, noma kunjalo imali yesampula izokubuyisela kuma-oda wakamuva.
Ngingawathola nini amasampuli noma imikhiqizo?
1) Ngesampula: Ngokuvamile isampula intando ithatha izinsuku ezingama-7-10 ukukhiqiza ngemuva kokuqinisekiswa komklamo.
2) Uku-oda ngobuningi: Ngemuva koku-oda kuqinisekisiwe, kuzothunyelwa efektri futhi bazohlela usuku lokuqala lokukhiqiza ngokuya ngobuningi bakho. Uma usuku seluqinisekisiwe, cishe izinsuku zokusebenza ezingama-30 zokukhiqiza. Isinyathelo ngasinye sizokukhombisa izithombe nenqubo yomkhiqizo.
Yimiphi imigomo yokukhokha ongayamukela?
Samukela L / C at emehlweni, T / T noma Western Union.
Ikheli:Idolobhana laseHufang, idolobha laseNancahng, esifundazweni iJiangxi, eChina
Hoodie engenalutho, Hoodies Unisex, I-Podi Hoodie, Uboya Hoodie, Ukuphrinta Kwesiko Hoodie, I-Hoodie yangokwezifiso,